किन अत्तालिदैछौ तिमी ? जिन्दगी बाँकी छ अझै - Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column किन अत्तालिदैछौ तिमी ? जिन्दगी बाँकी छ अझै
केही भएको छैन यहाँ
आजको दिन ढलेको मात्र हो ।
साहस बिलाएको छैन भने धैर्य गर्ने
यतिबेलासम्म पर्खिएको साँझ
आजलाई अन्धकार भएको मात्र हो।
समय नमिलेको मात्र हो ।
तिमीले चाहेको बजे (घडी) कुर्नु छ अझै ।
झिनो आशा अझ झिनो भएर
आज सूर्य अस्ताएको मात्र हो ।
केही हुनेछ भोलि पक्कै यहाँ
आज हतार लागेको मात्र हो
जब न्यानो बिहानी आउनेछ,
कोपिला फूल हुनेछ।
आकाश हेर न, ढाकेको छ बादलले
जिवनमा पनि केही असहजताले
आज ढाकेको मात्र हो।
( तपाईंसंग पनि यस्तै प्रेरणादायी र सकारात्मक ऊर्जा दिने कथा, लेख रचना छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ । )
Previousसफल व्यवसायी जेफ बेजसका सफलताका ३ सुत्र
Nextप्रियंका चोपडाका सफलताका सुत्र